ခငျြးပွညျနယျတောငျပိုငျးနဲ့ ကလေးမွို့ကို ဆကျသှယျ ထားတဲ့ လမျးတလြှောကျမှာ စဈတပျနဲ့ CDF တပျတှေ ၁၀ ရကျကြျော တိုကျပှဲဆကျတိုကျဖွဈနပေါတယျ။
ဖုနျးကှနျရကျနဲ့ အငျတာနကျလိပျစာကို ခွရောခံတဲ့ စနဈ တိတိကကြ မခနျ့မှနျးနိုငျတဲ့ VPN ( Virtual Private Network) လို့ချေါတဲ့ စနဈကို သုံးရငျ ထောငျဒဏျ ၃ နှဈအထိ...
The post Can You Really Get Paid To Sext? first appeared on Yoma3.
မေလ ၃၁ ရက် ၂၀၁၃ ခုနှစ်
ပလောင် ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ရှမ်းပြည်နယ် မန်တုံမြို့နယ်ရှိ မန်ပါတ်ရွာမှ ရွှေလီ လျှပ်စစ်တာဝါတိုစောင့် တာဝန်ကျနေသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်သုံးဦး မေ ၂၉ ရက်တွင် လုပ်ကြံခံရသည်ဟု တအာင်း ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံးက ကြေ ညာချက်ထုတ်ပြန်သည်။
လုပ်ကြံခံခဲ့ရသည့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များမှာ စိုးသိန်း (တပ်ကြပ်ကြီး)၊ ရဲဝင်း (တပ်ကြပ်)၊ အမည်မသိ (ဒု-တပ်ကြပ် တစ်ဦး) တို့ဖြစ်သည်ဟု တအာင်း ကျောင်းသားနှင့် လူငယ် အစည်းအရုံး၏ သတင်းနှင့် လူ့အခွင့်အရေး ဌာန၏ မေ ၃ဝ ထုတ်ပြန်ချက်တွင် ပါရှိသည်။
''အဲဒီရဲသုံးယောက်ကို မန်တုံ ဆေးရုံမှာပဲ ရင်ခွဲစစ်ဆေးနေပါတယ်၊ ဒီညနေလောက် ပြီးမလားမသိဘူး၊ ဒီနေ့ မနက် မန်တုံ ပြည်သူ့စစ်တွေရော ရဲတွေရောသွားသယ်တုန်းက သေနတ်ကျည်ဆန် ထိမှန်တဲ့ ပုံစံနဲ့
သေဆုံးခဲ့တယ်'' ဟု တအာင်း ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များအစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ၁ မိုင်းမျိုးအောင်က ပြောသည်။
''သူတို့ မိဘတွေက ပြောတာတော့ သူတို့ကိုလမ်းပေါ်မှာစောင့်ပြီး သေနတ်နဲ့ ပစ်တယ်လို့ပြောတယ်၊ သူတို့ သေနတ်တွေနဲ့ပဲလား အခြား သေနတ် တွေနဲ့လားတော့ မပြောတတ်သေးဘူး'' ဟုလည်း တအာင်း
ကျောင်းသားနှင့် လူငယ်များ အစည်းအရုံး အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး မလိုည်းလှားရိုင်းက မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
အဆိုပါ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များကို လုပ်ကြံသည့် တရား ခံကိုမူ မသိရသေးဘဲ မန်တုံရဲစခန်းမှ စုံစမ်းနေဆဲဖြစ်သည်ဟု တာဝန်ကျ ရဲဝန်ထမ်းတစ်ဦးက မဇ္ဈိမကိုပြောသည်။ ရဲသားတို့၏ ရုပ်အလောင်းကို သင်္ဂြိုဟ်ရန် မန်တုံမြို့နယ် ''မိုးသောက်ကြယ်'' နာရေးကူညီရေးအသင်းက အကူအညီပေးမည်ဖြစ်သည်။ အစိုးရဝန်ထမ်း ရဲတပ်ဖွဲ့ ဝင်များကို တိုက်ခိုက်ခံရခြင်းသည် ယခုအကြိမ်မှာ ပထမဆုံး ဖြစ်သည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 10:05 AM ,0comments
မန္တလေးတိုင်း၊ ရမည်သင်းမြို့၊ ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်တွင် ယခုအချိန်အထိ မိုးရွာသွန်းမှုမရှိသေးသောကြောင့် ရပ်ကွက်တချို့တွင် သောက်သုံးရေပြတ်လတ်မှုနှင့် ကြုံတွေ့နေရကြောင်း ဒေသခံများက မဇ္ဈိမ ကို ပြောသည်။
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ရန်အောင်(ရနောင်) မြို့မှ ဒေသခံ ဦးမောင်ဝင်းက ''မိုးကောင်းကောင်း မရွာသေးဘူး။
သောက်ရေတွင်းတွေ ကလည်း တော်တော်ခန်းနေပြီ''ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ပျော်ဘွယ်မြို့နယ် ရန်အောင်မြို့တွင် သောက်ရေတွင်း သုံးတွင်းရှိသော်လည်း နှစ်တွင်းမှာ ခမ်းခြောက်နေပြီ ဖြစ်၍ မြို့တောင်ဘက်မှ အနက်ပေ ၄ဝ ခန့်ရှိသော သောက်ရေတွင်းကိုသာ အားထားရခြင်းဖြစ် သည်။ ထို တွင်းတစ်တွင်းကို ပျော်ဘွယ်မြို့ ဈေးတန်းရပ်ကွက်၊ မြို့မရပ်ကွက်၊ ကန်တော်လေးရပ်ကွက်၊ သီရိမြိုင် ရပ်ကွက်၊ အောင်မင်္ဂလာရပ်ကွက်၊ အောင်ဇေယုရပ်ကွက်နှင့် ရန်အောင်မြို့အပါအဝင် အခြားရွာသုံးရွာရှိ လူဦးရေ သုံးထောင့်ငါးရာကျော်က အားထားနေရခြင်းဖြစ်သည်။
''ရေက မကျန်သလောက်ကိုဖြစ်နေပြီ။ ရေတွင်းထဲ ရေနည်းနည်းရောက်လာလိုက် နှစ်ယောက်လောက် ခပ်လိုက်နဲ့ ရေကကုန်သွားလိုက်နဲ့။ အခု မနက်ဆိုလေးနာရီလောက်တည်းက ထခပ်ရတယ်။ ညဆိုလည်း ညည့်နက်တဲ့အထိပဲ'' ဟု ထိုသောက် ရေတွင်းမှရေကို ဂါလံပုံးဖြင့်ထည့်ကာ လိုက်ရောင်းသည့် ရန်အောင်မြို့ က ကိုထွန်းထွန်းနောင် က ပြောသည်။
ယင်းဒေသများတွင် ဧပြီလမှစကာ သောက်ရေတွင်းများ ရေခမ်းလာပြီး မေလတွင် ပိုမိုဆိုးရွားလာခြင်းဖြစ်သည်။ ဒေသခံတချို့က လက်နှိပ်တုံကင်မှရေကို သောက်ရေ အဖြစ် အသုံးပြုကြရသည်။ လက်နှိပ်တုံကင်မှ ထွက်သောရေသည် ပုံမှန်အချိန်တွင်ရေချိုမဟုတ်သဖြင့် သုံးရေအဖြစ်သာ အသုံးပြုကြသည်။
ရန်အောင်မြို့ရှိ မဇ္ဈိမလမ်း နာရေးကူညီမှုအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ကိုသက်က ''နှစ်လလောက်တော့ ကောင်းကောင်း အခက်တွေ့နိုင်သေး တယ်။ မိုးကလည်းမရွာဘူး။ သုံးရေကလည်းရှားလာတယ်။ ကျွန်တော် တို့ဆို မော်တာနဲ့ ဆွဲတာတောင် သံပုံးတစ်ပုံးထွက်ဖို့ကိုမလွယ်ဘူး'' ဟု ဆိုသည်။
၎င်းက ဆက်ပြီး ''သောက်ရေတွင်းကို ပြင်ဖို့ အလှူရှင်တွေကိုသွားပြောဖို့ရှိတယ်။ အစောပိုင်းတည်းက ပြင်ဖို့ စိတ်ကူးရှိပေမယ့် မိုးရွာတာစောင့်နေတာ။ မိုးမရွာတော့ ပိုဆိုသွားတယ်'' ဟု ပြောသည်။
၂ဝ၁ဝ နောက်ပိုင်း အခြေအနေ
ပျော်ဘွယ်မြို့သည် မိုးနည်းဒေသဖြစ်သကဲ့သို့ ၂ဝ၁၁ ခုနှစ် နောက်ပိုင်းတွင်ရနောင်မြို့၏ ရေအတွက် အားထားရသော ဧက ၅ဝဝ ခန့်ကျယ်ဝန်းသည့် ရနောင်ကန်ကြီးပျက်စီးပြီးနောက်ပိုင်း ရေရှားပါးမှု ပိုမိုဖြစ်လာပြီး ယခုနှစ်သည် အဆိုးဝါးဆုံးနှစ်ဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံများကဆိုသည်။
ထို့အပြင် မိုးရွာသီတွင် ခြောက်ခမ်းနေသော ရေကန်ထဲတွင် ကြက်သွန်ခင်းများနှင့် စပျစ်ခြံများ ဝင်ရောက် စိုက်ပျိုးမှုကလည်း မြေအောက်ရေနည်းပါးမှုကို ပိုဖြစ်စေကြောင်း ဒေသခံများကပြောကြသည်။
ဒေသခံများက ရနောင်ကန်ကို ပြန်လည်ပြုပြင်လိုပြီး ပြုပြင်ရန် မြို့နယ်အဆင့်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး၊ မန္တလေးတိုင်း လွှတ်တော်နှင့် ပျော်ဘွယ်မြို့နယ်ရှိ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီမှ လွှတ်တော် အမတ်များအား တင်ပြထားသော်လည်း အကြောင်းထူးခြားခြင်းမရှိသေးကြောင်း ဒေသခံများက ပြောသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 10:01 AM ,0comments
ဘာသာရေးအကြောင်းပြ အကြမ်းဖက်မှုများကို ဆန့်ကျင်ကြပါစို့
လူသားတိုင်းအတွက် မွေးရာပါ အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးတွင် လွတ်လပ်စွာယုံကြည်ခွင့်၊ လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခွင့်နှင့် အခြားလူမျိုးတို့၏ ယုံကြည်မှုတို့ကို လေးစားမှုရှိရပေမည်။ လားရှိုးမြို့တွင် လက်ရှိဖြစ်ပွား
နေသော အကြမ်းဖက်မှုများ၊ ပစ္စည်းဥစ္စာ အဆောက်အဦးများ၊ ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အဆောက်အဦးများကို ပစ်မှတ်ထား ဖျက်ဆီးနေမှုများသည် လူ့အခြေခံအခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်မှုဖြစ်သည်။
နိုင်ငံသားတိုင်း အေးချမ်းလုံခြုံစွာ နေထိုင်နိုင်ရေးမှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ ရပ်တည်ဖြစ်ထွန်းမှု၏ အခြေခံဖြစ် ပေသည်။ နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး တည်ငြိမ်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရန်မှာ နိုင်ငံသားတိုင်း အခြေခံလူ့အခွင့်
အရေးကို အေးချမ်းတည်ငြိမ်စွာဖြင့် ရရှိမှုတွင် အများအပြား မူတည်နေသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လမ်းကြောင်းပေါ် လျောက်လှမ်းရန်ကြိုးစားနေ ချိန်တွင် နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းက မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ဘာသာရေး အကြမ်းဖက်မှုများကို စိုးရိမ်ပူပန်စွာ အနီးကပ်စောင့်ကြည့်နေ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ စီးပွားရေး ပြန်လည်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာရန်မှာ နိုင်ငံခြား ရင်းနှီးမြုပ်နှံသူများအတွက် စိတ်ချရသော အခြေနေများ ကို ဖန်တီးပေးရန် အရေးကြီးသည်။
လုံခြုံရေးများ ချထားသည့်ကြားထဲက လမ်းမများပေါ်တွင် ဆိုက်ကယ်၊လူအုပ်စုလိုက် များဖြင့် တုတ်တရမ်းရမ်း၊ ဓါးတလှမ်းလှမ်းဖြင့် ဥပဒေမဲ့ ပြုလုပ်နေသည်မှာ ဥပဒေ စိုမိုးရေးအတွက် တာဝန်ရှိသူများ မျက်မှောက်တွင် ပင် ဖြစ်ပွားနေပေသည်။ တာဝန်အရှိဆုံးမှာ နိုင်ငံတော်အစိုးရ ဖြစ်ပေသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများကို ထိရောက်စွာ မတားဆီး၊ မနှိမ်နင်းနိုင်ပါက အစရအား ပြည်သူလူထု၏ ယုံကြည် မှု လျော့လာလိပ်မည် ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် အစိုးရတစ်ခုတည်းဖြင့် မပြီးပါ။ နိုင်ငံသားတိုင်းမှာ မိမိနိုင်ငံ အေးချမ်းသာယာဖွံ့ဖြိုးရေး၊ နိုင်ငံသားတိုင်း အေးချမ်းသာယာစွာနေနိုင်ရေး တို့အတွက် ကိုယ်စီ တာဝန်ရှိကြပါသည်။
ထိုအကြမ်းဖက်မှုများကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ဆန့်ကျင်ပြီး အရေးယူဆောင်ရွက်ရန် မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းတွင် တာဝန်ရှိသည်။ ငါနှင့်မဆိုင်လို့၊ ငါနှင့်မတည့်လို့၊ ငါနှင့် ဘာ သာမတူလို့ စသဖြင့် အကြောင်း အမျိုးမျိုးပြပြီး ဆိတ်ဆိတ်နေလျှင် ငါ့အလှည့်ရောက်လျှင် နောက်ကျသွားလိမ့်မည်။ အကြမ်းဖက်မှုက ငါ့ဘက်လှည့် လာသည့်အခါ ငါတစ်ယောက်တည်းပဲ ကျန်နေတော့မည်။
အထူးသဖြင့် လူနည်းစုများအား နိုင်ငံသားတိုင်း၏ တန်းတူအခွင့်အရေးဖြင့် ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရန် အရေးကြီးပေသည်။ အကြမ်းဖက်မှုများ၏ နောက်ကွယ်တွင် ကြိုးကိုင်လှုံ့ဆော်နေသူများ၊ အုပ်စုများ ရှိ၊ မရှိအားလည်း သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံရေး အဖွဲ့အစည်းများအနေနှင့် တရားဥပဒေနှင့်အညီ မှန်မှန်ကန်ကန် စုံစမ်းဖော်ထုတ်သင့်ပြီး ထိုသူများ၊ ထိုအုပ်စုများရှိပါက တည်ဆဲဥပဒေများအရ တိတိကျကျ လျင်လျင်မြန်မြန် အရေးယူသင့်သည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 9:46 AM ,0comments
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 9:44 AM ,0comments
ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့မှာ ကေအိုင်အို ကချင်လွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့နဲ့ အစိုးရငြိမ်းချမ်းရေး ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့ကြား ဒီကနေ့ဆက်လက် ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဒုတိယမြောက်နေ့ ဆွေးနွေးပွဲ မှာ နှစ်ဖက်စစ် တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ အကြီးအကဲတွေ သီးသန့်ဆွေးနွေးခဲ့ကြပါတယ်။
နှစ်ဖက်တပ် နေရာချထားရေးအပါအဝင် စစ်တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကို ညှိနှိုင်းရာမှာ ရလာဒ်ကောင်းတွေရရှိခဲ့ကြောင်း၊ မေလ ၃၀ ရက် မနက်ဖြန်မှာလုပ်မယ့် အပြီးသတ်ဆွေးနွေးပွဲပြီးရင် ကြေညာချက် ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်ကြောင်း ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးက ပြောပါတယ်။
"တပ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးတဲ့အပိုင်းကတော့ ဒီနေ့မှာပြီးသွားပါပြီ၊ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တပ်နေရာချထားမှုက စပြီးတော့ပေါ့၊ အားလုံးညှိနှိုင်းပြီးဖြစ်ပါတယ်၊ နက်ဖြန်ခါ အပြီးသတ်ဆွေးနွေးပွဲပြီးတော့ ထုတ်ပြန်ကြေ ညာချက်တွေနဲ့ ထုတ်ပြန်သွားမှာပါ၊ အခုထိကတော့ အားလုံးအဆင်ပြေပါတယ်၊ တိုးတက်တဲ့လက္ခဏာတွေပဲတွေ့ရတယ်လို့ ကျနော်တို့ပြောလို့ရပါတယ်၊ အခုကျနော်တို့ နှစ်ဦးနှစ်ဖက် တပ်တွေ ဆွေးနွေးကြ မှာက ရှမ်းမြောက်ကိစ္စတွေ၊ ကချင်ပြည်နယ်ကိစ္စတွေရော အားလုံးကျနော်တို့ ဆွေးနွေးမှာဖြစ်ပါတယ်၊ နက်ဖြန်ခါတော့ ကျနော်တို့ အသေးစိတ်ကလေး ထုတ်ပြန်ပါ့မယ်"
ကေအိုင်အိုဖက်ကလည်း လောလောဆယ်အထိ နှစ်ဖက်ဆွေးနွေးမှုကို သတင်းထုတ်ပြန်တာ မရှိသေးပါဘူး။
ဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာ သမ္မတရုံးဝန်ကြီး ဦးအောင်မင်းနဲ့ ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြင့်စိုးခေါင်းဆောင်တဲ့ အစိုးရကိုယ်စားလှယ်တွေဟာ ကချင်နှစ်ချင်းခရစ်ယာန်အဖွဲ့ချုပ်(KBC)ရဲ့ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာ ဆမ်ဆွန်ခေါင်းဆောင်တဲ့ ဘာသာရေးဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကို သွားရောက်တွေ့ဆုံခဲ့ပါတယ်။
လေ့လာသူအဖြစ်ရောက်ရှိနေတဲ့ တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် ၈ ဖွဲ့ကတော့ မြစ်ကြီးနားမြို့နဲ့ ၂၇ မိုင်ကွာဝေးတဲ့ မေခ၊ မလိခမြစ်ဆုံကို လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။
ဒါ့အပြင် မြစ်ကြီးနားမြို့ဆွေးနွေးပွဲကို လေ့လာသူအဖြစ် တက်ရောက်လာတဲ့ ကုလသမဂ္ဂအတွင်းရေးမှူးချုပ်ရဲ့ အထူးကိုယ်စားလှယ် မစ္စတာဗီဂျေနမ်ဘီးယားနဲ့ ကေအိုင်အေ ဒုစစ်ဦးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်ဂွမ်မော် တို့ဟာ မြစ်ကြီးနားမြို့ခံ ကချင်တိုင်းရင်းသား ရပ်မိရပ်ဖများနဲ့ သီးခြားစီတွေ့ဆုံခဲ့ကြောင်းလည်း သတင်းရရှိပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:15 PM ,0comments
ရန်ကုန်တိုင်း လှိုင်သာယာ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန် စံကောင်း ပီနံအိတ်စက်ရုံမှာ အခုလ ၂၇ ရက်နေ့ ညက စတင်အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေကြတဲ့ စက်ရုံအလုပ်သမား ၁၆ ဦးထဲက အမျိုးသမီးနှစ်ဦး ဒီကနေ့ မူးလဲသွား တဲ့အတွက် လှိုင်သာယာဆေးရုံမှာ ကုသမှုခံယူခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
ရက်သတ္တနှစ်ပတ်ကျော်ကြာလာတဲ့အထိ အလုပ်သမားတွေရဲ့ တောင်းဆိုချက်ကို အလုပ်ရှင်ဘက်က မလိုက်လျောသေးတဲ့အတွက် လုပ်သားတစ်ထောင်ကျော်လောက် လုပ်ငန်းခွင်မ၀င်ကြပဲ ဆန္ဒပြနေကြပြီး လုပ်သား ၁၆ ယောက် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြနေရာမှာ အလုပ်သမနှစ်ဦး အခုလို မူးလဲသွားကြတာလို့ ဆန္ဒပြလုပ်သားတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ ကိုအောင်ကိုဦးက RFA ကိုပြောပါတယ်။
"သူတို့က မလိုက်လျောနိုင်ဘူးဆိုတာ ငွေရေးကြေးရေးတို့ ခုနက ကျနော်တို့တောင်းဆိုတဲ့ အလုပ်သမားတစ်ယောက်ကို ဝန်ခံကတိထိုးရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သမဂ္ဂနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ ကျနော်တို့ဘက်က တောင်းဆို တာကို သူတို့ဘက်က မလိုက်လျောနိုင်ဘူး ပြောလိုက်တယ်ခင်ဗျ၊ သူတို့ဘက်က အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းကို ဝင်မစွတ်နဲ့ဆိုပြီးတော့ အဲဒီအချက်ကိုသူတို့ဘက်က လက်မခံဘူးလို့ပြောပါတယ်"
အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်သမား၊ အလုပ်ရုံနဲ့ အလုပ်သမားဥပဒေ စစ်ဆေးရေးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်ကတော့ ဆန္ဒပြကြတဲ့သူတွေအနေနဲ့ အလုပ်ရှင်အပေါ် တောင်းဆိုပိုင်ခွင့်ရှိတယ်ဆိုပေမယ့် ဥပဒေအတိုင်းလုပ်ကြဖို့ မနေ့ကပြုလုပ်တဲ့ လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန် အစည်းအဝေးပွဲမှာ သတင်းထောက်တွေကို ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
အဲဒီစက်ရုံအလုပ်သမားတွေအနေနဲ့ တောင်းဆိုချက်တွေမရမချင်း အလုပ်မဆင်းကြပဲ ဆက်လက် ဆန္ဒပြတောင်းဆိုသွားကြမယ်လို့ ပြောပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:12 PM ,0comments
ရခိုင်ပြည်နယ်က ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာ ကျန်းမားရေးစောင့်ရှောက်မှု မရရှိ
မြန်မာအစိုးရရဲ့ တားဆီးကန့်သတ်မှုတွေကြောင့် ရခိုင်ပြည်နယ်အနောက်ပိုင်း ဒုက္ခသည်စခန်းတွေက ဒုက္ခသည်တွေမှာ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနဲ့ အခြေခံစောင့်ရှောက်မှုတွေ မရရှိပဲဖြစ်နေတယ်လို့ MSF နယ်စည်းမခြား ဆရာဝန်များအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။
အဲဒီဒေသမှာ ကူးသန်းသွားလာရေးကို ထိန်းချုပ်ထားတဲ့အတွက် ဆေးရုံ၊ စာသင်ကျောင်း၊ ငါးဖမ်း၊ ထင်းခွေစတာတွေ မလုပ်နိုင်ပဲရှိနေတယ်လို့ အဲဒီဒေသက ပြန်ရောက်လာခဲ့တဲ့ နိုင်ငံတကာ ကူညီစောင့်ရှောက်ရေး အဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ MSF က ပြောပါတယ်။
အဆုတ်နာ ဝေဒနာရှင်တွေ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်တွေအတွက်လဲ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု မရပဲဖြစ်နေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
MSF အဖွဲ့ဟာ ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ အနှစ် ၂၀ လောက် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပြီး HIV/AIDS ၊ တီဘီ အဆုတ်နာစတဲ့ ရောဂါတွေနဲ့အတူ အခြေခံကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုတွေ ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်လို့ AP သတင်း က ဖေါ်ပြပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:10 PM ,0comments
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကွန်ရက်ဟာ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အတွက် အောက်ခြေအဆင့်ဒေသခံတွေရဲ့ အမြင်သဘောထားတွေကို ဒီနေ့ ရခိုင်ပြည်နယ် စစ်တွေမြို့မှာ မေးမြန်းဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့ မေလ ၂၅ ရက်နေ့ကစလို့ သံတွဲခရိုင်၊ ကျောက်ဖြူခရိုင်တွေမှာ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပြီး အခုနောက်ဆုံးအစီအစဉ်အဖြစ် စစ်တွေခရိုင်မှာ ပြုလုပ်တာဖြစ်တယ်လို့ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) ရခိုင်ပြည်နယ် ဒုတိယဥက္ကဌဖြစ်သူ ဦးစိုးလေးက RFA ကို ပြောပါတယ်။
"ကျနော်တို့ရခိုင်မှာဆိုရင် ၃ နေရာကျင်းပဖို့ စီစဉ်ပြီးတော့ လုပ်ထားပါတယ်၊ အဲတော့ ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၅ ရက်မှာ သံတွဲခရိုင်မှာလုပ်ခဲ့တယ်၊ တစ်ခါ ၂၇ ရက်နေ့မှာ ကျောက်ဖြူခရိုင်မှာ လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ အခု ၂၉ ရက်နေ့ စစ်တွေခရိုင်ကတော့ ကျနော်တို့နောက်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်"
မြန်မာနိုင်ငံ ပညာရေးစနစ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အောက်ခြေဒေသခံတွေရဲ့ အမြင်တွေကိုသိရှိအောင် အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ကဦးစီးပြီး ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းအသီးသီးက မြို့နယ် ၂၀ ကျော်လောက်မှာ ဒေသခံတွေရဲ့ သဘောထားအမြင်တွေကို ရယူနေတာလို့ သိရပါတယ်။
လာမယ့် ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော်မှာ ပညာရေးနဲ့ဆိုင်တဲ့ ဥပဒေသစ်တစ်ခု ပေါ်ပေါက်လာအောင် တင်သွင်းဆွေးနွေးသွားဖို့အတွက် ပြည်နယ်နဲ့ တိုင်းဒေသတွေမှာ လိုက်လံဆွေးနွေးနေတာဖြစ်ပြီး လာမယ့်ဇွန်လ ၈ ရက်နဲ့ ၉ ရက်နေ့တွေမှာ နိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ပညာရေးညီလာခံကို ရန်ကုန်မြို့ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်က မျက်မမြင်ကျောင်းမှာ ကျင်းပမယ်လို့ သိရပါတယ်။
အလားတူ ပညာရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ဆွေးနွေးပွဲတစ်ရပ်ကို တနသာင်္ရီတိုင်း ကော့သောင်းမြို့မှာ မနေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆွေးနွေးပွဲမှာ ပညာရေးမူဝါဒဆိုင်ရာ အခြေခံမူ၊ မြန်မာနိုင်ငံရေးစနစ်ဖွဲ့စည်းပုံ အထွေထွေအကြံပြုချက်၊ ပညာရေးစီမံခန့်ခွဲမှုနဲ့ အုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းနဲ့ ဘာသာစကား သင်ကြားရေးဆိုင်ရာမူဝါဒ၊ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းဆိုင်ရာ ပညာရေးမူဝါဒစတဲ့ အကြောင်းအရာ ၈ ချက်ကို အဓိကဆွေးနွေးခဲ့ကြတယ်လို့ သိရပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:07 PM ,0comments
ဘော့စ်နီးယား-ခရိုအက်ခေါင်းဆောင် ၆ ဦးကို ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်
ယူဂိုဆလားဗီးယားနိုင်ငံ ပြိုကွဲစဉ် ၁၉၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်တွေတုန်းက မူဆလင် အမျိုးသမီးတွေကို သတ်ဖြတ်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ ဘော့စ်နီးယားက နှင်ထုတ်ခဲ့တဲ့ အမှုတွေနဲ့ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံက ခရိုအေး ရှား နိုင်ငံရေးနဲ့ စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ခေါင်းဆောင် ၆ ယောက်ကို ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စစ်ရာဇ၀တ် ခုံရုံးကနေ နှစ်ရှည် ထောင်ဒဏ်တွေ ချမှတ်လိုက်ပါတယ်။
ယူဂိုဆလားဗီးယား နိုင်ငံဟောင်းက စစ်ရာဇ၀တ်မှုတွေအတွက် ဖွဲ့စည်းထားတဲ့ နိုင်ငံတကာ ရာဇ၀တ်ခုံရုံးက တရားသူကြီးတွေကတော့ ကွယ်လွန်သွားတဲ့ သမ္မတဟောင်း Franjo Tudjman အပါအ၀င် ခရိုအေးရှား ခေါင်းဆောင်ဟောင်းတွေဟာ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံထဲမှာ ခရိုအေးရှား တိုင်းပြည် ထူထောင်ဖို့ ကြိုးပမ်းရာမှာ ပါဝင်ခဲ့တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
လူသတ်မှု၊ အဓမ္မပြုကျင့်မှုနဲ့ တိုင်းပြည်က နှင်ထုတ်တဲ့ လုပ်ရပ်တွေဟာ စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ စစ်သားတစုရဲ့ ကြုံသလို လုပ်ရပ်မျိုးတွေ မဟုတ်ဘဲ ဘော့စ်နီးယားမှာရှိတဲ့ ခရိုအေးရှားတွေက ပိုင်ဆိုင်ကြောင်း ပြောနေတဲ့ နယ်မြေကနေ မူဆလင်တွေကို အပြီးတိုင် ဖယ်ရှားဖို့ အစီအစဉ်ရဲ့ တစိတ်တပိုင်း ဖြစ်တယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
အပြစ်ရှိကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခံခဲ့ရသူ ၆ ဦးကိုတော့ ထောင်ဒဏ် ၁၀ နှစ်ကနေ ၂၅ နှစ်အထိ စီရင်ခဲ့ပြီး၊ ဒီအထဲမှာတော့ ဘော့စ်နီးယားနိုင်ငံတွင်း ခရိုအေးရှား တိုင်းပြည်အဖြစ် ကြေညာရာမှာ ဦးဆောင်ခဲ့သူ Jadranko Prlic ကို အမြင့်ဆုံး ပြစ်ဒဏ်ပေးခဲ့တာပါ။
ဘော်လကန်စစ်ပွဲအတွင်း ယဉ်ကျေးမှုတွေကို ဖျက်ဆီးခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေအနက် ထင်ရှားတဲ့ ရာစုနှစ်ပေါင်းများစွာ သက်တမ်းရှိတဲ့ Mostar တံတားကို ဖျက်စီးမှုအတွက်လည်း သူတို့ ၆ ဦးစလုံးမှာ တာဝန် ရှိကြောင်း ကုလသမဂ္ဂရဲ့ စစ်ရာဇ၀တ်ခုံရုံးက ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:02 PM ,0comments
ကလေးဦးရေ ကန့်သတ်မှု ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ ရှင်းလင်းချက်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်မှာရှိတဲ့ မူဆလင် လူမှုအသိုင်းအ၀ိုင်းအနေနဲ့ ကလေး ၂ ဦးပဲ ယူရမယ်ဆိုတဲ့ ဒေသန္တရအမိန့်ကို လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းတွေက ဝေဖန်တာဟာ တဘက်စောင်းနင်း ကျပြီးတော့ ပကတိအခြေအနေတွေကို မသိလို့ဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အာဏာပိုင်တွေက ပြောဆိုပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ်အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင် ကို ဒီအမိန့် ထုတ်ပြန်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကိုသားညွန့်ဦး က ဆက်သွယ်မေးမြန်းထားပါတယ်။
“ဒီဥစ္စာက အခုမှ ထွက်တဲ့ဥစ္စာ မဟုတ်ဘူး။ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄ လောက်ကတည်းက ရှိနေခဲ့တဲ့ အမိန့်လို့ ပြောပါတယ်။ အဲ့ဒီဥစ္စာတွေကို အကောင်အထည်ဖော်တာက UN အဖွဲ့အစည်းနဲ့ AZT ဆိုတဲ့ INGO အဖွဲ့တွေပါခင်ဗျ။ သူတို့ အကောင်အထည်ဖော်တယ်။ ၉၂၊ ၉၃၊ ၉၄ ကစပြီး အကောင်အထည်ဖော်တာ အခု ရခိုင်အရေးအခင်း ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ပြန်ကြည့်တော့ လူဦးရေက အင်မတန် များပြားလာပါတယ်။ သူတို့ကတော့ သားဆက်ခြား အောင်မြင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လူဦးရေ ပေါက်ဖွားနှုန်းက တအားများတဲ့အတွက် အခုလို ပြဿနာဖြစ်လာတဲ့အခါ ရခိုင်ကိစ္စကို စုံစမ်းစစ်ဆေးရေး ကော်မရှင်ကလည်း အကြံပြုထားတာတွေ ရှိပါတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို ပြန်ပြီးတော့ အကောင်အထည် ဖော်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့ ဒေသန္တရအမိန့်နဲ့ ထုတ်တာပါခင်ဗျ။”
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျ။ ၉၂၊ ၉၃ တုန်းက ထုတ်တဲ့အမိန့်က ဒီအစိုးရအနေနဲ့ ထုတ်ပြန်တာလား။ အမိန့်လား ဥပဒေလား အဲ့ဒါက။
ဖြေ။ ။ “အမိန့်ပါပဲခင်ဗျ။ ဒေသန္တရအမိန့်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောတစ်ခုတည်းပါပဲ။ ကျန်တဲ့ နေရာတွေတောင် မပါပါဘူး။”
မေး။ ။ ဟုတ်ကဲ့။ အခု ရခိုင်အစိုးရကနေပြီးတော့ ထုတ်လိုက်တဲ့သဘောကရော အမိန့်လား ဥပဒေလား။
ဖြေ။ ။ “အမိန့်လို့ ပြောပါတယ်ခင်ဗျ။ ဥပဒေအပိုင်းမှာတော့ ကျနော်တို့က သိပ်နားမလည်ပါဘူး။ ဒီဥစ္စာက အရင်တုန်းက ရှိခဲ့တဲ့ဟာကို ပြန်ပြီးတော့ တည်မြဲအောင် အမိန့်ထုတ်တာပါပဲခင် ဗျ။ ပြည်နယ် အစိုးရအနေနဲ့တောင် မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျ။ သက်ဆိုင်ရာ မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနဲ့ အဲ့ဒီမှာကိုင်တဲ့ နကစအဖွဲ့ကနေပြီး ထပ်ပြီး အတည်ပြုပြီး ထုတ်ပေးတာပါ။ အဲ့ဒီမောင်တောခရိုင် တစ်ခုတည်းပါပဲခင်ဗျ။”
မေး။ ။ ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကနေပြီးတော့ အကြံပြုထားတဲ့အတိုင်းဆိုတာ ရခိုင်စုံစမ်းရေးကော်မရှင်ကရော ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့2Child Policy ဆိုပြီးတော့ပဲ အကြံပြုတာလား။
ဖြေ။ ။ “2 Child Policy လို့တော့ မပြောပါဘူးခင်ဗျ။ သူက ပထမစာမျက်နှာမှာတော့ ဒီလို လူဦးရေ ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုတယ်။ အဲ့လို ထိန်းချုပ်တဲ့အခါမှာလည်း ကိုယ့်ဘာသာရေးအရ ကန့်ကွက်နိုင်တယ်။ ဒီလိုမျိုးလေး ဆိုထားပါတယ်။ ဒါပေမဲ့လည်း နောက်စာမျက်နှာမှာတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း တောင်းဆိုထားပါတယ်။ နောက်ပြီးတော့ အဲ့ဒီမှာ ဒီလို လူဦးရေ ထိန်းချုပ်တာလည်း အရင်ထဲက ရှိတဲ့အတွက် လုပ်သင့်ပါတယ်လို့ သူတို့က အဲ့ဒီမှာ အကြံပြုထားတာ ရှိပါတယ်။”
မေး။ ။2Child Policy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ ရခိုင်အာဏာပိုင်တွေရဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ အစိုးရအနေနဲ့ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေနဲ့ ပြန်ပြီး Review လုပ်နေတယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောနေလို့ပါ။ အထက်ကရော ဘာများပြော
ဖြေ။ ။ “အဲ့ဒါကတော့ ကျနော် မသိဘူးခင်ဗျ။ ဒီဥစ္စာက ကျနော်တို့ ပြည်နယ် အစိုးရအနေနဲ့လည်း ထုတ်တာမဟုတ်ဘူး။ ဒေသန္တရအမိန့်ဆိုတာ သူတို့ ထုတ်ခွင့်ရှိတယ်လေ။ ရန်ကုန်မှာ ပုဒ်မ ၁၄၄ အစား ၁၈၈ ထုတ်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့။”
မေး။ ။ အဲ့တော့ အဲ့ဒီအထဲမှာ ကလေး ၂ ယောက်အပြင် အမျိုးသမီး မိန်းမ တစ်ယောက်ပဲ ယူရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးရော ပါပါသလား။
ဖြေ။ ။ “ပါပါတယ်ခင်ဗျ။ ဘာလို့လဲဆိုရင် သူတို့က ၄ ယောက် ယူတဲ့အခါကျမှ စောစောကလည်း ကျနော် ပြောပြီးပြီ။ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သိန်းဋ္ဌေး သူ တာဝန်ထမ်းဆောင်စဉ်က အဲ့ဒီမှာ မေးတယ်။ ယောကျာ်း တစ်ယောက်က မိန်းမ ၄ ယောက်က တရားဝင်ယူတယ်။ တရားမ၀င် မိန်းမတွေကလည်း ရှိတယ်။ အဲ့ဒီက မွေးလာတဲ့ ကလေးတွေနဲ့ အားလုံး မိသားစုပေါင်းလိုက်ရင် ၈၂ ယောက်ရှိတယ်။ အဲ့လိုမျိုး မိသားစု ၁၀ ဆိုရင် လူဦးရေ ဘယ်လောက်ရှိမလဲ။ အဲ့ဒါလေးတွေ ကျနော်တို့ ပြန်တွက်ပြီးတော့ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း အဲ့ဒါကို စိုးရိမ်တဲ့အတွက် တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကလည်း မောင်တောတစ်ခုတည်း ကို ကျနော်တို့က ဒေသန္တရအမိန့် ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော - မောင်တောခရိုင်ဆိုရင် ဘူးသီးတောင်၊ မောင်တော ပါပါတယ်ခင်ဗျ။”
မေး။ ။ အခု ဒီအမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာပါတယ်ခင်ဗျ။ ဒါက ခွဲခြားဆက်ဆံတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပေါ့။ ဝေဖန်သံတွေ ထွက်လာပါတယ်။ ဒီဝေဖန်ချက်တွေအပေါ်မှာ ဦးဝင်းမြိုင်တို့ ဘာများ တုံ့ပြန်ချင်ပါသလဲ။
ဖြေ။ ။ “သူတို့ကတော့ ဘယ်လို ဝေဖန် ဝေဖန်လေ။ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်တယ်လို့ ပြောလို့ရှိရင် အဲ့ဒီလူတွေက ဒီမှာ လာမကြည့်ဘဲနဲ့ ပြောတယ်လို့ ကျနော် ထင်ပါတယ်။ ကျနော်ပြောမယ်လေ ၁၀ ပေပတ်လည် ရှိတဲ့အိမ်ထဲမှာ လူ ၂၀၊ ၃၀ ဘယ်လိုလုပ် နေမလဲ။ နောက်ပြီးတော့ အဲ့လိုမျိုး လူဦးရေ ပေါက်ဖွားနှုန်း များလာတဲ့အတွက် ဒီမှာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေကလည်း စိုးရိမ်စိတ်တွေ များလာပါတယ်။ အဲ့ဒီအတွက် ရေရှည်အတွက် ကြည့်ပြီး ကျနော်တို့ နိုင်ငံတော်အနေနဲ့ ဒီလို အမိန့်ထုတ်ပြန်တယ်လို့ပဲ ကျနော်တို့က ယူဆပါတယ်။ အမိန့်ထုတ်တာကလည်း မြန်မာတနိုင်ငံလုံးကို ထုတ်တာလည်း မဟုတ်ဘူး။ ရခိုင်ပြည်နယ် တပြည်နယ်လုံးကို ထုတ်တာလည်း မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီမောင်တောခရိုင်တစ်ခုတည်းကိုပဲ ထုတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒါကိုမှ လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ဒီလိုပြောတယ်ဆိုရင်တော့ ဒါ တဖက်သတ် စွပ်စွဲတယ်လို့ပဲ ကျနော် ထင်ပါတယ်။”
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 2:00 PM ,0comments
သားသမီးကန့်သတ်မှု ဒေသန္တရအမိန့် မြန်မာအစိုးရ ပြန်သုံးသပ်မည်
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်မှာ ရှိတဲ့ မူဆလင်တွေကို ကလေး ၂ ယောက်ပဲ မွေးရမယ်ဆိုတဲ့ ကန့်သတ်ချက်ထားတဲ့ ကိစ္စကို ပြန်ပြီးသုံးသပ်မယ်လို့ အစိုးရက ပြောလိုက်ပါတယ်။ လူဦးရေ ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ ကလေးယူတဲ့ အရေအတွက်ကို ဒေသခံအစိုးရက ထိန်းချုပ်တဲ့အပေါ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အပြင် လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ဝေဖန်ခဲ့ပြီးနောက်မှာ အခုလို ပြောလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ ဘန်ကောက် VOA ရုံးက Daniel Schearf ရဲ့သတင်းကို မစုမြတ်မွန်က တင်ပြပါတယ်။
ရခိုင်ပြည်နယ် မောင်တောခရိုင်မှာ ရိုဟင်ဂျာတွေကို ကလေး ၂ ယောက်ပဲ ယူရမယ်လို့ သတ်မှတ်တဲ့ ကိစ္စကို နိုင်ငံခြား သတင်းမီဒီယာတွေမှာ ဖော်ပြတော့မှ သိရတယ်လို့ အစိုးရ ပြောခွင့်ရသူ ဦးရဲထွဋ်က ဗွီအိုအေကို အခုလို ပြောပါတယ်၊
“သတ်မှတ်ချက် အမိန့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ ကျနော်တို့ ဘာမှ မသိရသေးပါဘူး။ နိုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေပေါ်မှာ ပါမှပဲ သိပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို ပြည်နယ်အစိုးရနဲ့ ကျနော်တို့ ပြန်ပြီးတော့ မေးကြည့်ပါဦးမယ်။”
မောင်တောခရိုင်က မူဆလင်တွေကို မိန်းမတစ်ယောက်ပဲ ယူရမယ်။ ကလေး ၂ ယောက်ပဲ မွေးရမယ်ဆိုပြီး သတ်မှတ်ထားတဲ့ ကိစ္စတွေက မြန်မာသတင်း မီဒီယာတွေမှာ ပြီးခဲ့တဲ့ သီတင်းပတ်ထဲမှာ စတင် ဖော်ပြကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ရခိုင်ပြည်နယ်ထဲမှာ ရိုဟင်ဂျာ မူဆလင်တွေ အများစုရှိတဲ့ မောင်တောခရိုင်ထဲက မောင်တောမြို့နဲ့ ဘူးသီးတောင်မြို့ ၂ မြို့မှာ ရခိုင်ဒေသခံ အစိုးရက အခုလို ကန့်သတ် လိုက်တာ ဖြစ်ပါတယ်။
တကယ်တော့ မူဆလင်တွေ ကလေးမွေးဖွားတဲ့ အရေအတွက် သတ်မှတ်ချက်က အရင် စစ်အစိုးရ လက်ထက်မှာကတည်းက ရှိခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နှစ် ဧပြီလမှာ စခဲ့တဲ့ ရခိုင်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တွေနဲ့ မူဆလင်တွေကြား ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီးနောက် တင်းမာမှုတွေ လျော့နည်းသွားစေဖို့အတွက် သမ္မတ တာဝန်ပေးထားတဲ့ ရခိုင်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်ကနေ မျိုးဆက်ပွား စီမံကိန်း လုပ်ဖို့ အကြံပေးခဲ့ တာ ဖြစ်တယ်လို့ ရခိုင်ပြည်နယ် အစိုးရ သတင်းထုတ်ပြန်ရေးအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြိုင်က ပြောပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ နယ်စပ်ဒေသလုံခြုံရေး နစကတွေက ဒီသတ်မှတ်ချက်ကို ၂၀၀၅ ခုနှစ် လောက်ထဲက စပြီး တင်းတင်းကျပ်ကျပ် အကောင်အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေတာ ဖြစ်တယ်လို့ Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ အာရှရေးရာ ညွှန်ကြားရေးမှူး ဖီးလ် ရောဘတ်ဆန် (Phil Robertson) က ပြောပါတယ်။
“အငြင်းပွားစရာ ဖြစ်နေတဲ့ ကိစ္စတွေကို ထိန်းဖို့ သူတို့ ကြိုးစားနေတာလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။ ဒါတွေကို လုပ်နေတယ်။ ဗဟိုအစိုးရကလည်း လက်ခံတယ်လို့ သူတို့က ပြောနေတာပါ။ အခုတော့ ဒီကိစ္စက ဗဟိုအစိုးရရဲ့ မူဝါဒ ဟုတ် မဟုတ် ဆိုတာ ဗဟိုအစိုးရဘက်က တုံ့ပြန်စရာ ဖြစ်လာပါပြီ။”
ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက ရခိုင်ပြည်နယ်မှာ လူ ၂၀၀ လောက် သေဆုံးပြီး ၁ သိန်း ၄ သောင်းလောက် အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရတဲ့ ပဋိပက္ခ အကြောင်းအရင်းကို ရခိုင်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က စုံစမ်းပြီး မကြာခင်တုန်းက အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ မူဆလင်လူဦးရေ မြန်မြန်ဆန်ဆန် တိုးပွားနေတာကြောင့် ဒေသခံ ရခိုင်တွေက မူဆလင်တွေ လွှမ်းမိုးသွားမှာကို စိုးရိမ်နေကြတယ်လို့ ကော်မရှင်က ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် မူဆလင်တွေရဲ့ မျိုးဆက်ပွားမှုကို ထိန်းချုပ်သင့်တယ်လို့ အကြံပြုထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကိုယ့်ဆန္ဒမပါပဲ ကန့်သတ်တဲ့ ကိစ္စကြောင့် ပိုပြီး တင်းမာမှုတွေ ဖြစ်နိုင်တာကိုလည်း ရခိုင်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က ထောက်ပြပါတယ်။ ဒေသန္တရ အစိုးရက ကန့်သတ်တာကို သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် အနေနဲ့ ထောက်ခံမယ် မခံဘူး ဆိုတာ မဆုံးဖြတ်ရသေးဘဲ၊ ကော်မရှင်ရဲ့ အကြံပြုချက်တွေကို သုံးသပ်ပြီးတဲ့အခါမှာ ကြေညာမှာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောခွင့်ရသူ ဦးရဲထွဋ် က အခုလို ပြောပါတယ်။
“ရခိုင်စုံစမ်းရေး ကော်မရှင်က အကြံပြုတဲ့ အချက်တွေ အားလုံးကို ပြန်သုံးသပ်ရဦးမှာ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စကို ဗဟိုအစိုးရက လက်ခံတယ် မခံဘူး မပြောနိုင်သေးပါဘူး။ ဒါကြောင့် ဒီကိစ္စအတွက် တစုံတရာ မှတ်ချက် မပေးနိုင်သေးပါဘူး။”
လက်ထပ်ထိမ်းမြားချင်တဲ့ ရိုဟင်ဂျာတွေအနေနဲ့ ကလေး ၂ ယောက်ပဲ ယူရမယ်လို့ ကတိပြုရတဲ့အကြောင်း Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့က ပြောပါတယ်။ ကလေး၂ ယောက်ထက် ပိုယူရင် အဲ့ဒီကလေးတွေကို ကျောင်းထားလို့ မရသလို၊ အစိုးရ ဝန်ဆောင်မှုတွေလည်း မရဘူးလို့ ဆိုပါတယ်။
ကလေး ၂ ယောက်ထက် ပိုယူသူတွေအနေနဲ့ ဒဏ်ငွေဆောင်ရမှာ ဖြစ်သလို ထောင်ဒဏ် ကျနိုင်မယ့် ကိစ္စကို လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့တွေက ထောက်ပြနေကြတာ ဖြစ်တယ်လို့ ဗွီအိုအေ သတင်းထောက် Daniel Schearf က ပြောပါတယ်။
တချို့အမျိုးသမီးတွေဆိုရင် ငွေဒဏ်၊ ထောင်ဒဏ် မကျအောင် အသက်အန္တရာယ်ရှိတဲ့ ပဋိသန္ဓေ ဖျက်ချမှုတွေတောင် လုပ်ကြတယ်လို့ Human Rights Watch အဖွဲ့က ဆိုပါတယ်။ ဒီလို ကန့်သတ်ထားတာကို ပယ်ဖျက်ပေးဖို့ Human Rights Watch လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့ရဲ့ တောင်းဆိုမှုကို အစိုးရ ပြောခွင့်ရသူ ဦးရဲထွဋ် က ပယ်ချပါတယ်။
“သူတို့ပြောနေတဲ့ အကြောင်းတွေက သူတို့ တဘက်သတ်ရတဲ့ အချက်တွေပေါ်မှာပဲ အခြေခံပြီး ပြောနေတာပါ။ အခု ကျနော်တို့ဘက်ကတော့ ရခိုင်ကော်မရှင်က အကြံပြုထားတဲ့ ကိစ္စတွေကို အကောင် အထည်ဖော်ဖို့ ကြိုးစားနေပါတယ်။ ကိစ္စတိုင်းကို လူ့အခွင့်အရေး ရှုဒေါင့်နဲ့ ကိုက်ညီ မညီ၊ ဒေသဆိုင်ရာ တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ၊ နောက် နိုင်ငံတကာစံတွေနဲ့ ကိုက်ညီမှု ရှိ မရှိ စဉ်းစားပြီး လုပ်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။”
မောင်တောခရိုင်က မူဆလင်တွေကို ကလေး ၂ ယောက်ပဲ ယူရမယ်ဆိုတဲ့ သတ်မှတ်ချက်ဟာ လူ့အခွင့်အရေးကို ချိုးဖောက်တာပဲလို့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဥက္ကဌ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် က တနင်္လာနေ့ကပဲ ပြောခဲ့ပါတယ်။
အမေရိကန် ပြည်ထောင်စုကလည်း ဒီလို ကန့်သတ်တဲ့အပေါ်မှာ အင်မတန် စိုးရိမ်ပြီး၊ ဒီကန့်သတ်ချက်တွေကို အမြန်ဆုံး ဖယ်ရှားပေးဖို့အတွက် အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာန ပြောခွင့်ရသူ ပက်ထရစ် ဗန်ထရဲလ် (Patric Ventrell) ကလည်း အင်္ဂါနေ့ကပဲ ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 1:56 PM ,0comments
ဧ၀ရက်တောင်ထိပ်ကို တက်ရောက်အောင်မြင်ခြင်း နှစ် ၆၀ ပြည့်
နယူးဇီလန်နိုင်ငံသား အဒ်မန် ဟီလာရီ (Edmund Hillary) နဲ့ နီပေါနိုင်ငံသား တန်ဇန်း နော်ဂေ (Tenzing Norgay) တို့ ဧဝရတ်တောင်ကို အောင်အောင်မြင်မြင် ပထမဆုံး တက်နိုင်ခဲ့တဲ့ နှစ် ၆၀ ပြည့် အခမ်းအနားကို နီပေါနိုင်ငံမှာ ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က ဆင်နွှဲခဲ့ကြပါတယ်။
ဟီလာရီ နဲ့ နော်ဂေ အပါအဝင် ကမ္ဘာ့အမြင့်ဆုံး ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ကို တက်ပြီး စံချိန်တင်ခဲ့ကြသူတွေကို ဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ အရောင်အသွေး စုံလင်တဲ့ အဝတ်အစားတွေနဲ့ စီတန်း လှည့်လည် မှုတွေ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။
တောင်တက်သမားတွေ လူကြီးလူကောင်းတွေက ဟီလာရီ နဲ့ နော်ဂေ တို့ရဲ့ ပုံတူ ရုပ်တုတွေမှာ ပန်းကုံးတွေ စွပ်ပေးပြီး နောက်ကနေ ရာချီတဲ့ လူအုပ်ကြီး လိုက်ပါလာတဲ့ မြင်းလှည်းတွေပေါ်မှာလည်း ဧည့်သည်တွေကို တင်ဆောင်ပြီး အခမ်းအနား ဆင်နွှဲဖို့ ဘုရင့် နန်းတော်ဆီ လာခဲ့ကြပါတယ်။
ဒီအထိမ်းအမှတ်ပွဲမှာ အမှတ်တရအဖြစ် ရုရှားနာမည်ကြီး အားကစား သမားတစ်ဦးကလည်း ဧဝရတ်တောင်ပေါ်ကနေ Base Jump ခုန်ချတဲ့နည်းနဲ့ လေထဲမှာ လေထီး ချက်ချင်း မဖွင့်ပဲ အလွတ် ခုန်ချပြပြီး စံချိန်သစ် တင်သွားပါတယ်။
ဗလာရီ ရို့ဂစ် (Valery Rozov) က ပေ ၂ သောင်းကျော် အမြင့်ကနေ ခုန်ချပြသွားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဟီလာရီ နဲ့ နော်ဂေ တို့ကတော့ ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ကို ၁၉၅၃ ခုနှစ် မေလ ၂၉ ရက်နေ့မှာ ရောက်ရှိခဲ့ တာဖြစ်ပါတယ်။
ပေ ၃ သောင်းနီးပါး အမြင့်ရှိတဲ့ ဧဝရတ်တောင်ထိပ်ဟာ ၂၀ ရာစုရဲ့ အထူးခြားဆုံး စူးစမ်းရှာဖွေမှုလို့ ယူဆထားကြတာ ဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 1:52 PM ,0comments
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 12:01 PM ,0comments
လားရှိုးပဋိပက္ခ မူဆယ်သို့ကူးစက်မည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေ
နန်းဆိုင်နွမ်| May 29, 2013
ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင် ယမန်နေ့ညက ပဋိပက္ခ ဖြစ်ပွားခဲ့ရာမှ နယ်စပ်ဒေသ မူဆယ်မြို့သို့ ကူးစက် လာမည်ကို ဒေသခံများ စိုးရိမ်နေကြသည်။
ပဋိပက္ခ ကူးစက်လာမည်ကို စိုးရိမ်သဖြင့် နယ်စပ်ဒေသ မူဆယ် – ကျယ်ဂေါင် အ၀င်ဂိတ်များနှင့် ခိုးပေါက် ဂိတ်များ အားလုံးကို တရုတ် ကွန်မန်ဒို တပ်များ ချထားပြီး မူဆယ်မြို့ထဲတွင် အစ္စလမ် ဘာသာဝင်များ၏ ဆိုင်ခန်း များအား ပိတ်ခိုင်းထားကြောင်း မူဆယ်မြို့ ဟိုမွန်ရပ်ကွက်နေ စိုင်းအိုက်စံက ဧရာဝတီ သတင်းဌာနသို့ ပြောသည်။
“မူဆယ်မြို့မှာတော့ တော်တော် ငြိမ်နေတယ်။ ဘယ်သူမှ အပြင်မထွက် သလောက်ပဲ။ အစ္စလမ် ဘာသာဝင်တွေ ကတော့ အထုပ်တွေနဲ့ ဘယ်သွားကြလဲ မသိဘူး။ တရုတ်ပြည် မှာတော့ အ၀င်ရော၊ အထွက်ပါ သူတို့ကို ပိတ်လိုက်ပြီ” ဟု စိုင်းအိုက်စံက ဆိုသည်။
ယမန်နေ့ည ၁၁ နာရီ ခန့်က မူဆယ်မြို့ ၄၅ ရပ်ကွက်ရှိ အစ္စလမ် ဘာသာဝင် စာသင်ကျောင်း အနီးတွင် သုံးဘီးဆိုင်ကယ် အစီး သုံးဆယ်ခန့်နှင့် တုတ်၊ ဓားများ ကိုင်ဆောင်ကာ စာသင်ဆောင်ကို ဖျက်ဆီးရန် ကြိုးစားကြကြောင်း၊ ယင်းရပ်ကွက် လူကြီးနှင့် ပြည်သူများ အချိန်မီ တားဆီးနိုင်သည့် အတွက် ပဋိပက္ခ မဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း ၎င်းက ဆက်ပြောသည်။
“အခုဆိုရင် ဆိုင်တွေလည်း အစောကြီး ပိတ်နေရတယ်။ နယ်စပ်ဒေသ ဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုကြောက်ရတယ်။ ဒီကြားထဲ လူဆိုးတွေက ရှိသေးတယ်။ ဒါပေမယ့် အဲဒီလိုပဋိပက္ခ ဖြစ်လာဖို့ ခက်မယ်ထင်တယ်။ ဒီမှာကလည်း လက်နက်ကိုင် တပ်ဖွဲ့တွေ ရှိတယ်လေ။ လုံခြုံရေးကတော့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် ယူရမှာပေါ့” ဟု မူဆယ်မြို့ ဈေးရပ်ကွက်တွင် နေထိုင်သည့် အမျိုးသား တဦးက ဆိုသည်။
လားရှိုး မြို့တွင် ဖြစ်ပွားသည့် ပဋိပက္ခကြောင့် လားရှိုး – မန္တလေး လမ်းပေါ်ရှိ နောင်မွန် – သီပေါ – ကျောက်မဲ လမ်းဘေး ဆိုင်များကို ဖျက်ဆီးထားကာ လာရှိုး – မန္တလေး လမ်းတလျှောက် အခြေအနေ မငြိမ်သက်ကြောင်း လားရှိုးမှ မန္တလေးသို့ ပြန်သည့် အမျိုးသမီးတဦးက ပြောသည်။
လားရှိုး ပဋိပက္ခနှင့် ပတ်သတ်ပြီး လားရှိုး သာသနာ့ ဗိမ္မာန်တွင် ပြည်နယ် ၀န်ကြီးချုပ်၊ ပြည်ထောင်စု သာသနာ့ ၀န်ကြီး ဦးဆန်းတင့်၊ အစ္စလမ် ဘာသာရေး ခေါင်းဆောင်များ၊ သံဃာတော်များ၊ လူမှုရေး အဖွဲ့အစည်း ခေါင်းဆောင်များ၊ ရပ်မိရပ်ဖများ တွေ့ဆုံကာ ယင်းပြဿနာကို ပူးပေါင်း ဖြေရှင်းရန် ဆွေးနွေးတိုင်ပင် ကြကြောင်း သိရသည်။
ယင်း ဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စု သာသနာ့ ၀န်ကြီး ဦးဆန်းတင့်က “သာမန် ရောင်းဝယ်မှုကနေ နောက်ခံပြီးတော့မှ ဖြစ်တာပါ။ ဒါ မဖြစ်သင့်တဲ့ ကိစ္စပါ။ ဒါကို ဘာသာပေါင်းစုံ အနေနဲ့ သတိပြု သင့်ပါတယ်။ ဘာသာရေးနဲ့ မသက်ဆိုင်ပါဘူး” ဟု ပြောကြောင်း ယင်းဆွေးနွေးပွဲကို တက်ရောက်ခဲ့သည့် လားရှိုးမြို့ အထက်တန်း ရှေ့နေ ဦးသောင်းလွင်က ဧရာဝတီသို့ ပြန်လည် ပြောပြသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့တွင် ယမန်နေ့ မေ ၂၈ ရက်နေ့ ညနေက အမျိုးသမီးတဦး ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ခံရမှုမှ စတင်ကာ အဓိကရုဏ်း အသွင် ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဗလီကျောင်း တကျောင်း၊ မွတ်စလင် မိဘမဲ့ကျောင်း တကျောင်းနှင့် ဆိုင်ခန်းများ မီးရှို့ ဖျက်ဆီးခံခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။
လားရှိုးအခြေစိုက် ခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးက မီးရှို့ ဆူပူ အကြမ်းဖက်သူများကို စုံစမ်းဖော်ထုတ် အရေးယူသွားမည်ဟု ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းများ ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ယမန်နှစ်က စတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး မြန်မာပြည် အလယ်ပိုင်း မိတ္ထီလာသို့ ယခုနှစ် မတ်လတွင် ကူးစက် ပြန့်ပွားလာခဲ့၍ ရန်ကုန်တိုင်း ဥကံ္ကမြို့တွင်လည်း မေလ အတွင်းက အဓိကရုဏ်းတခု ဖြစ်ပွားခဲ့သေးသည်။
လားရှိုး မွတ်စလင်ပိုင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်းများ မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံရ
မေစစ်ပိုင်| May 29, 2013
ယနေ့ မေလ ၂၉ ရက် မနက်ပိုင်း ငြိမ်သက်နေခဲ့သော ရှမ်းပြည်နယ် မြောက်ပိုင်း လားရှိုးမြို့သည် မွန်းလွဲပိုင်း၌ မီးရှို့ဖျက်ဆီးမှုများ ပြန်လည်ဖြစ်ပွားခဲ့ရာ မွတ်စလင်ပိုင် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ပျက်စီးခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
မျက်မြင်သက်သေများ၏ အဆိုအရ ဓားများ၊ သံဒုတ်များ ကိုင်ဆောင်ထားသော ရာနှင့်ချီသော လူငယ်များသည် ဆိုင်ကယ်များ စီး၍၎င်း၊ လမ်းလျှောက်၍၎င်း မြို့ကို ပတ်နေကြကာ တိုက်ခိုက်ရန် အသင့်ဖြစ်နေကြကြောင်း သိရသည်။
“ လူစုလူဝေးတွေက လမ်းလျှောက်တာတွေရော၊ ဆိုင်ကယ်တွေ သုံးဘီး တွေနဲ့ရော လက်နက်တွေကိုင်ပြီး သွားနေကြတယ်။ ဖမ်းဆီးတာ မရှိတော့ ရဲတင်းလာကြတာ။”ဟု ရပ်ကွက် ၁၀ နေ ဒေသခံ ကိုထွန်းကျော်မြင့်က ပြောပြသည်။
အမည်မဖော်လိုသူ နယ်မြေခံရဲတဦးက မွတ်စလင်ပိုင် ဆိုင်ခန်းများဖြစ်သည့် စိန်ခြယ် ဒန်ပေါက်ဆိုင်၊ ဦးခင်မောင် ကုန်စုံဆိုင်၊ ဇိုးဒီးယပ် အလှပြင်တိုက်တန်း၊ နယူးဆိုနီ အင်တာနက်ဆိုင်၊ မီကို ဒန်ပေါက် ဆိုင်၊ ရွှေလရောင် ကားဂိတ်၊ လားရှိုး ဓာတ်ပုံတိုက်၊ ကားပစ္စည်းအဟောင်းတန်းနှင့် စွန်းလွန်းလမ်းရှိ မွတ်စလင်ပိုင်ကုန်စုံဆိုင်တဆိုင်၊ သီတာအေး ဟိုတယ်နှင့် သီတာအေးရုပ်ရှင်ရုံ တို့ကို လူအုပ်များက မီးရှို့ခြင်း၊ ဖျက်ဆီးခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ပြန်ကြားရေး ဒု ဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ်က “ကနဦး သတင်းအများအရ ဒဏ်ရာရရှိသူ လေးဦး၊ သေဆုံးသူ တစ်ဦးရှိကြောင်း သိရှိရပါတယ်။ ပြည်နယ်ဝန်ကြီးချုပ်နဲ့ ပြည်ထဲရေး ဒုတိယ ၀န်ကြီးလည်း လားရှိုးမြို့ကို ရောက်ရှိနေပါတယ်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်း သေနတ်ပစ်ဖောက် လူစုခွဲခဲ့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်” ဟု ဖေ့ဘွတ်တွင် ရေးသားထားသည်။
ထိခိုက် ဒဏ်ရာရသူ ၄ ဦး ရှိသည်ဟု လားရှိုးမြို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းစံမင်းကလည်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
ဒဏ်ရာရရှိသူများ၏ အခြေအနေနှင့် ဒဏ်ရာရရှိသူ အရေအတွက် သိရှိရန် ဧရာဝတီသတင်းထောက်က လားရှိုးပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ သွားရောက်ခဲ့သော်လည်း ဆေးရုံတွင်း ဝင်ခွင့်မပြုခဲ့ပေ။
လားရှိုးခရိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးသို့ ဧရာဝတီမှ ဖုန်းဆက် မေးမြန်းရာတွင် လုံခြုံရေးသွားနေရသဖြင့် ဒဏ်ရာရစာရင်း၊ သေဆုံးစာရင်း မရသေးကြောင်း ပြောသည်။
“ ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးက ရပ်ကွက် ၇ ကို လုံခြုံရေး အပြည့်ဆင်းနေကြတယ်။ တခြားနေရာတွေလည်း လုံခြုံရေး ယူထားရတယ်။ အခြေအနေတွေအားလုံးက သူတို့ ပြန်လာမှ သိရမယ်”ဟု ခရိုင်ရဲရုံး တာဝန်ကျ ရဲသားက ပြောသည်။ ရပ်ကွက် ၇ မှာ မွတ်စလင် အများစု နေထိုင်ရာ ရပ်ကွက်ဖြစ်သည်။
ယမန်နေ့ ညနေ ၄ နာရီ ၁၅ မိနစ်တွင် အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဓာတ်ဆီရောင်းသူ မအေးအေးဝင်းအား ကျိုင်းတုံမြို့နေ အသက် ၄၈ နှစ်အရွယ်ရှိ မောင်နေ၀င်းက ဓာတ်ဆီဝယ်ရာတွင် မပြည့်ဟု ဆိုပြီး စကားများရာက ဓာတ်ဆီလောင်း မီးရှို့ခံရမှုမှ စတင်ကာ ဘာသာရေး အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားခဲ့ရပြီး ဗလီတကျောင်း၊ မွတ်စလင် မိဘမဲ့ကျောင်း တကျောင်းနှင့် ဆိုင်ခန်းများ မီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။
ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်တွင် “နေ၀င်းကို ဖမ်းဆီးပြီး ရဲစခန်းမှာ စစ်ဆေးတဲ့အခါ အင်္ကျီအိပ်ထဲက WY တံဆိပ်ပါ စိတ်ကြွ ဆေးပြား နှစ်ပြားပါတွေ့ရှိတဲ့ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၃၀၇၊ ၄၃၆၊ ၃၂၆ တိုိ့ အပြင် မူးယစ်ပုဒ်မ ၁၅/ ၁၆ (ဂ) နဲ့ ပါ အမှုဖွင့်အရေးယူခဲ့ပါတယ်”ဟု ရေးသားသည်။
လားရှိုးမြို့ မြို့မဈေးကြီးကို ပိတ်ထားရပြီး မြို့မှာ ကျီးလန့်စာစား ထိတ်လန့်နေကြရသည်။
ပဋိပက္ခတွင် သတင်းရယူနေသော နယ်ခံသတင်းထောက်တဦး ယနေ့ ညနေပိုင်းက ရိုက်နှိက်ခံရပြီး ဦးခေါင်းကွဲ ဒဏ်ရာရရှိသွားသည်။
လားရှို့မြို့မှ နယ်ခံသတင်းထောက်တဦးဖြစ်သူ အသက် ၃၀ ကျော် ကိုခွန်ဇော်ဦးမှာ လားရှိုးမြို့ ၇ ရပ်ကွက်တွင် ဆိုင်များ လိုက်လံဖျက်ဆီးနေမှုများကို သတင်းရယူနေစဉ် အကြမ်းဖက်သမားများက ဆိုင်ကယ်များနှင့် လိုက်လံတိုက်ခိုက် ရိုက်နှက်ကြောင်း၊ ကင်မရာနှင့် ကင်မရာအတွင်းမှ မန်မိုရီကဒ်ကို ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ကြောင်း၊ အကြမ်းဖက်သူများက ကိုခွန်ဇော်ဦးနှင့် အဖော်တဦးကို သံတုတ်ဖြင့် ရိုက်နှက်ခဲ့သဖြင့် ကိုခွန်ဇော်ဦးတွင် ခေါင်းကွဲ ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း၊ ကိုခွန်ဇော်ဦး၏ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူမှာ ကျောကုန်းတွင် ဒဏ်ရာရရှိသွားကြောင်း မြန်မာဂျာနယ်လစ်ကွန်ရက်မှ ဦးမြင့်ကျော်က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
“ခွန်ဇော်ဦးက ကျနော်တို့ ပဋိပက္ခ သတင်းရယူနည်းသင်တန်းသွားပေးတုန်းက သင်တန်းတက်တဲ့ သတင်းထောက်တယောက်ပါ။ သူက အလွတ်သတင်းထောက် လုပ်နေတာပါ။ ဒီနေ့ ၇ ရပ်ကွက်မှာ အကြမ်းဖက်ဖျက်ဆီးနေတဲ့သူတွေက သူ့ကို လိုက်ရိုက်ကြတယ်။ သူ ခေါင်းကွဲသွားတယ်။ ကင်မရာထဲက ကဒ် ဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတယ်” ဟု ဦးမြင့်ကျော်က ဆိုသည်။
ဧရာဝတီသတင်းထောက်၏ အဆို သတင်းထောက်များက လုံခြုံရေးအတွက် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်များနှင့် လိုက်ပါလိုကြောင်း အကူအညီတောင်းခံမှုကို လျစ်လျူရှုကာ လုံးဝ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှု မပေးကြောင်း သိရှိရသည်။
“သတင်းထောက်တွေအတွက် လုံခြုံရေး အဆင်ပြေအောင်လို့ လားရှိုး ရဲကွပ်ကဲရေးရုံးလိပ်စာကို ခရိုင်ရဲရုံးမှာ သွားတောင်းတာ မသိဘူးလို့ ပြောတယ်။ မိတ္ထီလာမှာတုန်းက သတင်းထောက်တွေနဲ့ ရဲတွေနဲ့ ပူးပေါင်းလုပ်ရတာ အဆင်ပြေပေမယ့် ဒီမှာက ဘယ်လိုမှ လုံခြုံမှုမရှိဘူး”ဟု ဧရာဝတီ သတင်းထောက်က ပြောသည်။
လားရှိုးမြို့ အမျိုးသားလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဦးစိုင်းစံမင်းကလည်း “တကယ်တမ်း ကာကွယ်နိုင်ဖို့ သေနတ်ကို ခြိမ်းခြောက်တဲ့အနေနဲ့ ဖောက်ပြဖို့ တနည်းပဲ ရှိတော့တယ်။ လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်တယောက်အနေနဲ့ ဘာမှ လုပ်လို့ မရဘူး။ တနေရာမှာငြိမ်သွားရင် နောက်တနေရာက ဆူပူလာတယ်။ လုံခြုံရေးက အပြည့် မရှိဘူး။ အခြေအနေတွေ ငြိမ်သက်သွားဖို့ကတော့ အာဏာပိုင်တွေကပဲ လုပ်နိုင်လိမ့်မယ်”ဟု ပြောဆိုသည်။
ဧရာဝတီ သတင်းထောက် နန်းဆိုင်နွမ် ပါဝင်ပူးပေါင်း ရေးသားသည်။
Posted by ၀ိမုတ္တိ at 11:56 AM ,0comments
မြန်မာ့ဖွံ့ဖြိုးရေး ဂျပန်က ဒေါ်လာသန်း ၅၀၀ ကျော် ကူမည်
Oklahoma မုန်တိုင်းသင့်ဒေသ သမ္မတအိုဘားမား သွားရောက်